Sida loogu helo sawirro soo-gaadhis dheer leh iPhone | Wararka IPhone
Sida loogu helo sawirro soo-gaadhis dheer leh iPhone-ka
Ruben gallardo | | Casharrada iyo buugaagta
In kamarada mobilada ay noqotay xalka ugu badan ee adeegsadayaashu adeegsadaan si ay sawiro ugu qaadaan meelkasta waa xaqiiqo. Intaa waxaa dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay dalabkan, awoodaha sawir qaadista ee taleefannada gacanta ayaa tagay ku jira crescendo. In kastoo laga yaabee, qaybtaan sumcad badan ayaa lagu gaadhay dhamaadka sare ee boosteejooyinka.
IPhone-ka ayaa ka mid ah kumbiyuutarrada bixiya fursadaha ugu badan marka sawir laga qaadayo. Iyo inbadan haddii aan haysanno iPhone 6S wixii ka dambeeya. Sababta Hagaag, maxaa yeelay qaabkan waxaa naloo soo bandhigay qaab cusub oo aan ku qaadno sawirro xamaasad leh, oo sidoo kale loo yaqaan "Sawirro Live ah". Si kastaba ha noqotee, Imaatinka macruufka 11 ee suuqa, qabashooyinkaani waxay qaateen caan badan oo saameyn cusub ayaa lagu dari karaa. Midkoodna waa midka loola jeedo soo-gaadhista dheer. Hadda laga bilaabo helitaanka sawir-qaadista oo leh saameyn soo-gaadhis dheer ayaa suurtagal noqon doonta. Aan aragno sida loo sameeyo.
1 Waa maxay sawirro soo-gaadhis dheer
2 Waxa ugu horeeya: adoo ikhtiyaar u leh Live Photos
3 Waxyaabaha labaad: ka hel sawirkaas Sawirada
4 Ta saddexaad iyo tan ugu dambeysa: ku dheji sawirka oo ku dheji shaandhada soo-gaadhista dheer
Waa maxay sawirro soo-gaadhis dheer
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan kuu sheegno waa in farsamadan ay adagtahay in la fuliyo. Intaa waxaa dheer, garaacista tallaalka sidoo kale waxay leedahay wax u gaar ah. Isticmaalayaasha ugu horumarsan ee sawir qaadashada ayaa hubaal ogaan doona waxa aan ka hadlayno. Laakiin si kooban oo kooban loo sameeyo, waxaad ogaan doontaa in kaamirooyinka sawirku ay sawirro ka qaadaan sawirro mahadsanid qaybaha kala duwan ee farsamadooda. Laakiin asal ahaan farsamadan ayaa ah in taas la helo mashiinka kaamerada ayaa si tartiib ah u xirmaya markaan riixno badhanka santuuqa. Tani waxay ka dhigi doontaa wax kasta oo dhaca - had iyo jeer dhaqaaq - waxaa lagu qabanayaa hal sawir. Sidaa awgeed natiijooyinkan cajiibka ah.
Waxa ugu horeeya: adoo ikhtiyaar u leh Live Photos
Si loo gaaro saameyntaan soo-gaadhista dheer ee iPhone-ka, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan haysanno waa ikhtiyaarrada Sawirrada Tooska ah ee firfircoon; haddii kale suurta gal ma noqoneyso in tallaal la siiyo. Waad arki doontaa taas dusha sare ee app astaamo kala duwan ayaa ka muuqda hoosta "Camera" on the iPhone Shan waa sax. "
Midigta bartanka kore waxaad ku arki doontaa astaan ​​leh wareegyo kaladuwan. Kani wuxuu noqon doonaa jaalle leh calaamadda birta ee hoosta. Tani waxay muujin doonaa in Live Photo hab la hawlgeliyey. Hadda waa inaad diirada saartaa oo aad garaacdaa sawirka qabashada. Wuxuu qabaa inuu jiro dhaqdhaqaaq ku saabsan qabashadaas si hadhow aan ugu yeelano saameyntaas sawirka lagu qabtay; Si kale haddii loo dhigo, haddii aad sawir ku qaadatid muuqaal leh dhammaan walxaha taagan, iPhone si dhib yar ayuu u awoodi doonaa inuu ku gaaro saameyn dheer oo soo-gaadhis ah tallaalkan.
Hadda, haddii aan qaadno sawir tilmaamaya waddo ay ku badan yihiin taraafikada - habeenkii waxay noqon doontaa mid soo jiidasho badan -, waxaan heli karnaa sawir soo-gaadhis dheer oo leh saameyn la yaab leh. Taasi waa sababta saldhigga uu ku saleysan yahay IPhone-ku ku saleysan yahay waa inuu ahaadaa mid wanaagsan.
Waxyaabaha labaad: ka hel sawirkaas Sawirada
Mar alla markii aan qabanno qabashada, waxay noqon doontaa waqti aan aadno arjiga "Sawirada" ee iPhone-ka. Qeybta hoose waxaan ku lahaan doonnaa fursado kala duwan: sawiro, xusuus, wadaag iyo albums. Midka na daneynaya ayaa ah ikhtiyaarkan ugu dambeeya. Gudaha waxaan ku yeelan doonnaa faylal kala duwan midkoodna waxaa lagu magacaabi doonaa "Sawirro Toos ah".
Gudaha waxaa ku jiri doona qabqabasho - iyo dhammaan dadka kale - ee lala qaatay shaqadan firfircoon. Ka taxaddar, haddii aynaan sawiro badan oo dheeri ah ka qaadin tallaalkaas ka dib ee na xiiseynaya, sidoo kale waxaan si dhakhso leh uga heli doonnaa ikhtiyaarka «Sawirro» ee liiska hoose. Markii aan furno, waxaan marka hore heleynaa sawirkaas.
Ta saddexaad iyo tan ugu dambeysa: ku dheji sawirka oo ku dheji shaandhada soo-gaadhista dheer
Waxaan hal talaabo u jirnaa inaan gaarno natiijada aan rabno. Ka dib markaan fureyno Sawirka Tooska ah ee na xiiseynaya, waxaan arki doonnaa adiga oo si adag ugu cadaadinaa, in cunsurrada sawirka ay soo noolaadaan. Intaad sawirka riixaysid, fartaada kor u qaad; menu cusub ayaa kaa soo muuqan doona adiga. Sida saxda ah, waa saameynta aad ku dalban karto Sawirkaas nool. Oo waa kuwa soo socda: Toos u noolow, Buble, Bounce iyo Exposure Long.
Sidaad adiguba horeba u maleysay, waa tan dambe ee na danaysa. Ka dib markii aad dooratay saameyntaas, tan waxaa si toos ah loogu dabaqi doonaa sawirka Iyo, haddii aan garaacnay aasaasiga, natiijadu waxay u qalantaa in lala wadaago asxaabtaada iyo qoyskaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loogu helo sawirro soo-gaadhis dheer leh iPhone-ka
Mahadsanid, maan ogayn berrina waan isku dayi doonaa.
Tani waa sida tarjumaha Siri ugu shaqeeyo iOS 11
3D dareemayaal ayaa gaari doona terminaalka Android sanadka soo socda